Golaha Wakiilada Somaliland oo muranka saami qeybsiga kuraasta sii murginaya ma garashey ka tahey? - Haldoornews
Golaha Wakiilada Somaliland oo muranka saami qeybsiga kuraasta sii murginaya ma garashey ka tahey?
Muranka saami qeybsiga kuraasta Golaha Wakiilada Somaliland ayaa soo taagnaa 25-ka sano ee Somaliland jirto. Sedexdii Xukuumadood ee Wadanka soo hogaamiyey (Cabdiraxmaan Tuur, Cigaal iyo Riyaale Kaahin) ayaan midna u suuragelin xal u helida muranka la dhashey Somaliland. Haddaba maadama Somaliland qaadatey nidaamka Dimuqraadiga ee saldhigu u yahey HAL QOF HAL COD maxaa keeney xal u heli la’aanta murankan soo jiitamey ee sii xoogayesta mar kasta oo Doorashooyin soo dhawaadan ?
Xukuumada Kulmiye ee Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud, Silanyo hogaamiyo ayaa noqotey Xukuumadii ugu horeysey ee u badheedha xali u helida muranka Saami geybsiga, waxaase nasiib daro la mooda, in jidka Xukuumada, Asxaabta Qaran iyo Golaha Wakiiladu u marayaan xal raadinta saami geybsiga u yahey mid qodxo badan oo keeni kara isqab-qabsi qabyaaladeysan, sababna u noqon kara doorashooyinka fooda inagu soo haya oo mar kale dib u dhac ku yimaad. Shirgudoonka Golaha Wakiilada, markii uu la tashi la sameeyey asxaabta Qaranka, ayaa dhawaan ku dhawaaqey in uu Guddi Hoosadkiisa Arrimaha Guddaha u kale dirayo Gobolada Dalka si ay ra’iga bulshada Somaliland ee ku saabsan saami geybsiga u soo ururiyaan. Ra’i ururin bulsheed waxa la hirgeliyaa marka la rabo in aragtiyo siyaasadeed oo kala fog la isu soo dhaweynayo, saami geybsiguna maa ahaa aragti siyaasadeed ee waa xisaab aan muran geli karin mar haddii HAL HAL u gee tahey 2 oo aaney sinaba ku noqon karin 3. Haddaba arrinka Shirgudoonku ku hawlanyahey oo durba dhawaaqii diidmada ah ee ugu horeyay ka soo yeedhayo Gobalka Awdal wuxuu u muuqdaa mid aan muranka xal u noqon ee sii murgiya, tiiyo uu waliba maal badan oo abaaraha wadanka ku habsadey lagaga hortegi lahaa ku baxaayo.
Ummadii Nidaamka Dimuqraadiga ah ee HAL QOF HAL COD si dhab ah u hirgelisaa waxay si fudud uga gudubtaa muranka saami qeybsiga kuraansta Golaha Wakiilada marka ay xaqiijiso laba arrimood oo udub dhexaad u ah nidaamka HAL QOF HAL COD, labadaas arrimood oo ah Tirada Guud ee Codbixiyaasha Wadanka iyo Tirada Gobolkasta ee Codbixiyaasha Doorashooyinka ka qeybgeli doona, tiiyo waliba tiknoloojiyada casriga maanta fududeyneyso xaqiijinta labadaas arrimood. Naasib wanaag waxa sannadkan 2016 Somaliland u hirgelaya xaqiijinta labadaas arrimood ee kor ku xusan mar haddii Diwaangelinta Codbixiyaashu si habsami leh uga socoto dhamaan wadanka. Haddaba mar haddii xaqiijanta Tirada Guud ee Codbixiyaasha wadanka iyo Tirada Gobolkasta ee Codbixiyaashu soo afjarmeyso intaan sannadku dhamaan waxa fududaaneya xal waaro oo laga gaadho muranka sami qeybsiga. Muxuuse yahey xalkaas ?
Qodobka 1-aad oo qeexaya tirada Guud ee Golaha Wakiilada inta ay noqoneyso, qodobka 2-aad oo isna qeexaya halkii kursi ee Golaha Wakiiladu inta code ee uu la siman yahey, halka qodobka 3-aad farayo Guddida Doorashooyinka in ay, la tashi asxaabta Qaranka ka dib, soo saaraan shaxda kuraasta Golaha Wakiilada ee Gobolkasta leeyahey marka Diwaangelinta Codbixiyaasha la soo afmeero 6 ilaa 5 bilood ka hor intaan Doorashooyinka loo dareerin.
Si fahamka Xeer Nidaamiyahan u fududaado aynu soo qaadano tusaale mala’awaal ah :-Tirada Guud ee Codbixiyaashii waxay noqotey 1.350.000 oo qof. Xeer Nidaamiyuhu wuxuu tilmaamey in tirada Guud ee Golaha Wakiiladu tahey 109 Xildhibaan, waxa kale oo u timaamey in Halkii kursi ee Golaha Wakiiladu u dhigmo 12500 cod. Guddida Doorashooyinka oo ka tilmaan qaadanayaa Xeer Nidaamiyaha Madaxweynuhu Digretada ku soo saarey waxey asxaabta Qaranka u soo bandhigeen shaxda tirada kuraasta Golaha Wakiilada ee hoos ku qoran, kadbi markii Guddidu asxaabta Qaranka isla xaqiiqsadeed natiijadii ka soo baxdey Diwaangelinta :
Wasiiru-dawlaha Madaxtooyada iyo Agaasimaha Guud oo si wada jira u dhagax dhigay waddo laami ah oo maridoonta gudaha madaxtooyada